ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်အတူပထမခြေလှမ်းများကို ယူ. နည်း
သင့်အနေဖြင့်ကျဆင်းခေါ်ဆောင်သွားပြီးသိသာထင်ရှားသောအခြားအွန်လိုင်းရှာနေစတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီင်. ဒါဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပါတယ်, သေးစိုးရွံ့အတှေ့အကွုံ. ရုတ်တရက်အားလုံးသည်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နှင့်ပိုပြီးဆိုရင် single နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖို့အခွင့်အလမ်းများ, သင်တစ်နှစ်လောက်တွင်တွေ့ဆုံခဲ့သည်င်ထက်! ဒါပေမယ့်လူကိုယ်တိုင်ကလူတွေ့ဆုံတူဘာမှမဟုတ်ကြောင်းနှင့်ထိုသို့ဆက်ဆက်စည်းကမ်းစာအုပ်နှင့်အတူမလာပါဘူးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့စောင့်ဆိုင်း ...
ထို Vocab ကိုနားလည်သဘောပေါက်: ပထမဦးဆုံးနှင့်အများဆုံးရှုပ်ထွေးခြေလှမ်းများတ lingo နှငျ့ဆကျဆံရာတှငျဖြစ်ပါတယ်. ဤရွေ့ကားအပြန်အလှန်သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအချိန်လေးများမှာ, ရိုက်ချက်မျိုးကိုသင်ထားခဲ့ဖို့လိုပါနှင့်သင်အဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုမည်သို့ကမ္ဘာ့ထဲတွင်ရွေးချယ်ကြပါ?
့စကားအပြန်အလှန်အကျိုးပြုခြင်းတစ်မျိုးဖွင့်ဆိုရန်အသုံးပြု "စစ်မှန်သောအသက်" လိုပဲ, ထိုကဲ့သို့သောလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်အဖြစ်, ကိုယ့်လူနှစ်ဦးအကြားဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကိုရှင်းပြဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချေး. ဒီအိုင်ဒီယာနေဆဲသင့်ရဲ့အွန်လိုင်းရွေးချယ်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည်:
ကဲ့သို့ - ဘားကနေဖြတ်ပြီးတစ်အပြုံးအတိုင်းဤစဉ်းစားကြည့်ပါ. ဒါဟာတစ်စုံတစ်ဦးရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖမ်းပြီးနိုင်. သို့သော်, သင်တို့ကိုကူးသွားနှင့်ဟုဆိုလျှင်ကဲ့သို့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မယ်, "မင်္ဂလာပါ။ "
မျက်တောင်ခတ် ကပယ်ချသည်နည်းတူ -a မျက်တောင်ခတ်ရုံအဖြစ်အလျင်အမြန်စေလွှတ်သည်.
အချစ်တော် - ဤသင် Starbucks ကမှာလိုင်းထဲမှာမှပြောဆိုသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျချက်ချင်းပဲတစ်ဦးမီးပွားခံစားခဲ့ရ; ဟုတ်ကဲ့့သွားတာမှာသူတို့ကိုခရီးဦးကြိုပြု, သင်မူကား, သူတို့ကိုတဖန်ဝင်တိုးဖို့မစောင့်နိုင်.
စာတိုပေးပို့ရေး - ဤသင်တို့ရှိသမျှ နေ့မှစ. စကားကိုနားထောငျဖို့စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြရတယ် "ဟုအဆိုပါ" လူတစ်ဦးမှတစ်ဦးကိုစာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုသည်. သူတို့ကသငျသညျသို့လုံးဝင်.
shock နဲ့ Amazing: သင်သည်သင်၏ဥစ္စာရေးသားခြင်းမပြုမီအနည်းငယ် profiles များအားလုံးဖတ်ရှုဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်, ကအဆင်ပြေင်.
– ဒါဟာပရိုဖိုင်းထဲမှာထည့်သွင်းရန်အရာကိုသိရန်ခက်ခဲင်ဘယ်လောက်သင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အသစ်ဆိုရင်. သင်တစ်ဦး haiku ရေးသားဖို့ချင်ပါဘူး, သင်မူကား, 5th တန်းစန္ဒရားရွတ်ဆို၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အတူမျက်ရည်ကျဖို့လူတွေကိုယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ချင်ကြပါဘူး.
– ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အသေးစိတ်ပေးရန်သေချာအောင်လုပ်ပါ, ရုပ်ရှင်ကိုချစ်နဲ့ 'ရာဇဝတ်မှုအတွက်လက်တွဲဖော်ကိုရှာဖွေလိုသူလူတစ်ထောင်ရှိတယ်,သင်နှင့် ပတ်သက်. အမှန်တကယ်ကွဲပြားခြားနားသော '' အဘယ်သို့သော? (သငျသညျ pastry ကျောင်းကိုသွားနှင့်ယခုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, သင်မကြာသေးမီက parasailing ကောက်?)
– သင်ကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အတွက်ရှာဖွေနေချင်တာလဲဆိုတာ Define, သင်လူတွေကသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်ကိုအတုလို့ထင်နိုင်တယ်မပြုလျှင်.
Bold Be: သင်က wallflower မဖြစ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ပူးပေါင်းင်, သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေချင်တယ်!
– သင်မပျောက်သွားဖို့ဘာမျှမရှိသည်! သငျသညျဤပုဂ္ဂိုလ်သို့ပြေးကြလိမ့်မည်အခွင့်အလမ်းတွေကိုဘာတွေလဲ? အဘယ်သူမျှမမှသုည; သူတို့ကိုစွေပြကြဘူး, သင်အမှန်တကယ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုလိုလျှင်.
– သင့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကသံသယအနိုင်ရမခံပါနဲ့. သငျသညျသငျ၌စိတ်ဝင်စားစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်သိဘယ်တော့မှ, သင်ကတစ်ဦးပါပေးမဟုတ်လျှင်. သင်ကထောင့်၌ထိုင်မှလှိုချိန်းတွေ့ပူးပေါင်းဘဲနှငျ့သငျပွုခဲ့ဖုံးအုပျ? သငျသညျကိုပြုလိုလျှင်, ငါသည်သင်တို့ကိုမှားယွင်းတဲ့ Website တွင်ထင်ပါတယ်.
အသစ်တစ်ခုခုကိုစမ်းကြည့်ပါ: "သင်တို့၏အမျိုးအစားကို သိ. မှားဘ​​ယ်အရာမျှမရှိပါ,"ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အတိတ်ဆက်ဆံမှုမှကွဲပြားခြားနားသောသူသည်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူစကားပြောလျက်ကြိုးစား.
သင်သည်သင်၏စိတ်ချမ်းမြေ့ဖွယ်ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်မှသင်တို့ကြည့်ရှုရွေးချယ်စရာထောင်ပေါင်းများစွာရှိသည့်အခါ, သငျသညျအဘယျသို့ခငျြသင်ယူဖို့ရေကိုစမ်းသပ်မှားဘာမှမရှိဘူး. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, သင်ကလူရွှင်တော်နှင့်အကောင်အထည်နှင့်အတူနေ့စွဲအပေါ်သွား, "ငါသည့်လူနေမှုအဘို့မိမိတို့နှာခေါင်း honks သူတစ်ဦးနှင့်အတူမဖြစ်နိုင်ပါ။ " အဲဒီမှားဘာမှမရှိဘူး, ဒါမှမဟုတ်သင်သင်တို့ရှိသမျှသည်တလျှောက်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြရတယ်အဘယျသို့င်လေ့လာသင်ယူ. သငျသညျဖွစျသှားနိုငျသောအရာကိုသိဘယ်တော့မှ.
သင်နေတတ်သလိုနေပါ: ဒေါက်တာအဖြစ်. Seuss ကကိုတင်, "ငါဖြစ်၏တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်ဖြစ်နိုင်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအရာပါပဲ။ " ဟုဒေါက်တာလိုလျှင်. Seuss ကပြောသည်, မှန်သည်ကိုရောက်တဲ့င်. တစ်စုံတစ်ဦးဖြစ်ဟန်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ဆက်ဆံရေးစတင်ရန်ခက်ခဲဒါဟာင်.
Yes "ကို hottie8675309" အလွန့်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့သင်ဘုံတွင်ရှိသည်သူတို့ရဲ့ profile ကိုအတွက်ဘာမှကိုမတှေ့နိုငျ. သင်သည်ကိုယ်ကိုထင်, "အင်းသူတို့ '' အမည်ဖြင့်မှည့အမျက်တော်စပျစ်သီး '' သူတို့အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်တအုပ်အဖြစ်. ငါမအထက်တန်းကျောင်းတွင်ဖတ်ထင်ပါတယ်။ "သင်ကသိမီသင်သည် '' မှာမိမိတို့ PhD dissertation ရေးသားခဲ့သည်သူတစ်ဦးနှင့်အတူနေ့စွဲပေါ်မှာဆိုရင်အမျက်တော်စပျစ်သီး။ '' လူမျိုးနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ကံကောင်းပါစေ!